ime ụlọ mgbodo ụzọ Factory | China ụzọ mgbodo ụzọ Manufacturers, Suppliers
14W 28W 18W mgbodo ìhè na ngosiputa
Patent anya, akwụkwọ akwụkwọ style, oriọna njide iji ọnwụ na n'usoro n'usoro, uko mgbanaka kọntaktị, mma ma a pụrụ ịdabere na. Onye na-ejide oriọna ahụ na-ejide onye na-ejide oriọna oriọna, 250V, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ike dị elu, ụdị ntụgharị nke radial, arụmọrụ dị mma. Adabara maka ọkụ nke anụ ụlọ, ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ dị elu dị elu, wdg.
Klas 1 14W 18W 28W gbanwere ọkụ fuji bracket
Patent anya, akwụkwọ style, oriọna njide iji ọnwụ na adiana, mma na a pụrụ ịdabere na. Onye na-ejide oriọna ahụ na-ejide onye na-ejide oriọna oriọna, 250V, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ike dị elu, ụdị ntụgharị nke radial, arụmọrụ dị mma. Adabara maka ọkụ nke anụ ụlọ, ụlọ nyocha, ụlọ ọrụ dị elu dị elu, wdg.
ájá na-enweghị ọkụ siri ike 14W 28W 35W prism na-ekpuchi mkpuchi mgbodo
Patent anya, akwụkwọ style, ìhè njide iji ọnwụ na n'usoro n'usoro, uko mgbanaka kọntaktị, mma ma a pụrụ ịdabere na. Onye isi oriọna na-ejide ọkụ, 250V, ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-ere ọkụ ọkụ, ike dị elu dị elu, ụdị ntụgharị nke radial, arụmọrụ dị mma. Ngwunye ọkụ nke prism bracket dị nro ma kwụsie ike, nwere njirimara nke uzuzu dị ala na ọdịdị mara mma, nke kwesịrị ekwesị maka oge ọkụ dị elu.
Water-àmà iru mmiri mmiri na-àmà tri-àmà mgbodo ìhè
Ọkụ kwekọrọ na klas IP65. Waterproof, mmiri na-àmà, ájá na-àmà akara imewe, ezi uche Ọdịdị, mara mma na-emesapụ aka, igbachi imewe ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi, mfe iji wụnye na ịnọgide na-enwe. Single isi ìhè njide, 250V elu àgwà ire ọkụ retardant engineering plastic, elu n'ibu ike, dayameta na elu propelling rotary ụdị, ezi kọntaktị arụmọrụ. Novel design, kọmpat Ọdịdị, mara mma anya, mfe iji wụnye na ịnọgide na-enwe, ngwa ngwa-amalite. Okwesiri maka ime ụlọ na n'èzí nwere mmiri na-enweghị mmiri, uzuzu na-enweghị ike ịchọta mmiri.